CFM-B2F (bhizinesi kufekitori) & 24-Hour Lead Nguva
Dhijitari rakabatana mativi
Iwe unoda kuziva kuti inotapukira sei iyo Indian mutant iri? Iwe unoda kuziva here kuwedzera kwemagetsi emagetsi muSouth Africa? Iwe unoda kuziva iyo yekuparadzanisa matanho ehurumende yeSouth Korea? K ...
ne admin pane 06-15-21
1. Musangano mutsva weFed wezvemari, uchaitwa kubva muna Chikumi kusvika gumi nemashanu. Vaongorori vazhinji vanofungidzira kuti Fed ichatanga kukurukura kudzikisa hukuru hwekutengwa kwemabhondi muhafu yepiri yegore rino voizadzisa gore rinouya vasati vakwidza chikwereti. . JPMorgan anotenda iyo Fe ...
Unoziva here kuti nhamba yevasina basa muIndia yakapfuura mamirioni gumi nemashanu, zvichikonzera mwero wekushaikwa kwemabasa kuwedzera zvakanyanya kusvika pa11.9% kubva pa7.9% munaKubvumbi? Mutsa tarisa nhau dzeCFM nhasi.
ne admin pane 06-11-21
1. French antitrust regulator yakabhadharisa Google mari inosvika mazana maviri nemakumi maviri emamiriyoni euros nekushandisa zvisizvo nzvimbo yayo yekushambadzira muchikamu chehunyanzvi. Google yakabvuma kugadzirisa uye kupedzisa kuzvida kwavo mubhizimusi rekushambadzira repamhepo, ichivimbisa kuunza nhanho dzezviyero zvekubvumidza vakwikwidzi ku ...
Iwe unoda kuziva here mamwe marongero matsva eKorea mutero Bureau? Iwe unoda kuziva nezve epasi rose M & An zviitiko? Iwe unoda kuziva here gore rino repasirese simba rekuvandudza mari r ...
ne admin pane 06-08-21
1. International Energy Agency: kuburitswa kweGlobal Energy Investment mushumo. Simba rekudyara pasirese rinotarisirwa kusvika kuUS $ 1.9 trillion gore rino, kuwedzera kwe10% panguva imwecheteyo gore rapfuura, ichidzokera kumatambudziko epamberi, ne70% yemari yakakwenenzverwa mumutsidziro ...
Unoziva here maererano neshumo rakaburitswa neILO musi wechipiri, Huwandu hwevanhu vasina mabasa pasi rose hunosvika mamirioni makumi maviri nemashanu muna 2022. Dzimwe nhau, Kind tarisa nhau dzeCFM nhasi.
ne admin pane 06-04-21
1. [ChiGerman Economic Weekly] nekuda kwekuvharwa kukuru kweguta, makambani anogadzira mishonga akavhara, uye huwandu hwekutengesa zvinodhaka zveIndia zvinotumirwa kuEurope nedzimwe nzvimbo zvino zvava mukudonha. Iyo COVID-19 denda yakakonzera kudzikira kwakakomba mufekitori inoshanda ra ...
Iwe unoda kuziva nezve shanduko yehutachiona hwakasiyana? Iwe unoda kuziva barometer yekutengesa muzvinhu? Iwe unoda kuziva zvakawanda nezveChampions League? Mutsa tarisa nhau dzeCFM nhasi.
ne admin pane 06-01-21
1. Vezvenhau vekunze vakaburitsa pachena kuti US National Security Agency yakabatana neDanish intelligence intelligence pakati pa2012 na2014 kuongorora zviitiko zvevakuru vakuru vakaita seSweden, Norway, Germany neFrance. Ministry of Foreign Affairs: chokwadi chakaratidza kakawanda kuti United Sta ...
Iwe unoziva here kana gadziriro dzeMitambo yeOlympic yeTokyo dzakamiswa, kurasikirwa kwehupfumi kweJapan kuchasvika ingangoita matrion 1.8 yen, kana ingangoita 15.7 bhiriyoni emadhora ekuUS? Unoda kuziva dzimwe nhau ini ...
ne admin pane 05-28-21
1. European Space Agency nguva pfupi yapfuura yakazivisa kuti ichatsigira madzimai maviri ekugadzira mapurojekiti akasimba ekuvandudza mapoka emangwana eesataneti kutenderera mwedzi uye nekupa mabasa ekufambisa nekufambiswa kwemisheni kumisheni yekuongorora kwemwedzi. Europe inoda kuvandudza sevhisi yeGPS ...
Iwe unoda here kuziva rumwe razvino ruzivo nezve Air India? Iwe unoda kuziva nezve indasitiri yekushanya yeThailand? Mutsa tarisa nhau dzeCFM nhasi.
ne admin pane 05-25-21
1. Treasure yeUS yakazivisa kuti inoda mari yakavharidzirwa yedigital mari inodarika US $ 10, 000 kuti imhan'arwe ku IRS (IRS). Mumushumo wezvemitero yezvemitero, Treasure yakati sekufambisa kwemari, makambani anotambira zvinhu zvakavharirwa senzira yekubhadhara sh ...
Unoziva here kuti pane anopfuura zviuru zvitatu, zviuru zvakachinjika muIndia. Dzimwe nhau, Mutsa tarisa nhau dzeCFM nhasi.
ne admin pane 05-21-21
1. Musi waMay 17, Mutungamiri weMexico akakumbira ruregerero padambudziko reToreon makore 110 apfuura. Njodzi yeToreon yakaitika panguva yeRevolution yeMexico, pakaurawa maChinese mazana matatu nemakumi matatu uye zvitoro zveChinese nezvitoro zvemiriwo zvakakuvara. Panguva iyoyo, hurumende yeQing yaida muripo uye kukumbira ruregerero ...
Iwe unoda kuziva here nezvePalestine yakarwa nehondo pakati peIsrael neGaza Strip? Iwe unoda here kuziva kukanganisa kweiyo yakasarudzika nguruve fever ku Africa? Iwe unoda kuziva kuomarara kwe th ...
ne admin pane 05-18-21
1. Mumazuva achangopfuura, kukakavadzana kwakakomba kwakamuka pakati peIsrael nevarwi vePalestine muGaza Strip. Mutauriri weHamas akazivisa musi wa13 kuti Qassam Brigade, boka rakashongedzwa reHamas, rakapfura makirogiramu mazana maviri nemakumi mashanu emaroketi anorema paRamon Airport padhuze nekumaodzanyemba kweIsrael ...
Unoziva here inoverengeka coronavirus, shanduko yakakurudzira kupararira kwedenda muIndia, rapararira kune dzinopfuura makumi mana nyika nematunhu. Unoda kuziva dzimwe nyika nhau. Mutsa cheki th ...
ne admin pane 05-14-21
1. Zvakaratidzwa kuti EU yakabvuma kuti AstraZeneca inononoka kushanda kwechibvumirano chekudzivirira cheCOVID-19 kwemwedzi mitatu, asi chete kana AstraZeneca ichipa madhora miriyoni zana nemakumi matanhatu emishonga yeCOVID-19 muna Chikumi. Chibvumirano chekutanga cheAstraZeneca neEU chaida AstraZeneca kuendesa ...